चर्चा र अालोचनामा शितल निवासकाे राजसी टीका – Himalaya TV
Home » राजनीति » चर्चा र अालोचनामा शितल निवासकाे राजसी टीका
चर्चा र अालोचनामा शितल निवासकाे राजसी टीका
६ कार्तिक २०७५, मंगलवार १७:२४
दशैँकाे टीकाकाे दिन शितल निवासमा देखिएका केही तस्वीर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका छन्। तस्वीरमा देखिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्यवहार सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तामाझ चर्चा र अालोचनाको केन्द्रमा छ। कतिपयले राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयको टिप्पणी राजनीतिक संस्कारमा केन्द्रित छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दशैँको टीका लगाइदिन कसैका लागि कुर्सीको व्यवस्था गर्नु र कसैलार्इ घुँडामा टेक्न लगाउनुलार्इ प्राय: सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले शक्तिको प्रदर्शनको रुपमा चित्रण गरेका छन्। बढी चर्चित बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले टीका ग्रहण गर्न घुँडा टेकेको तस्वीरप्रति टिप्पणी गर्दै लोकेन्द्र ठकुरी लेख्नुहुन्छ – देशको पूर्व प्रधानन्याधीशलार्इ घुँडा टेकाएर दशैंको टीका लगार्इदिने धृष्टता राजाहरुले समेत गरेका थिएनन् तर गणतन्त्र नेपालकी राष्ट्रपतिलार्इ त्यो आँट कहाँबाट आयो ? यसले न्यायालयमा के सन्देश जान्छ?
उषाकिरण तिमसेना लेख्नुहुन्छ – विचारहीनता नै विचार, सिद्धान्तहीनता नै सिद्धान्त आजको राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति हो। यस्ता अभ्यासले कहिँ पुगिँदैन। बलिदान, अपेक्षा र त्याग फगत कल्पनामा सीमित गरियो। लज्जा महशुस हुन्छ, भ्रममा रहन सकिएन।
प्रकाशविक्रम शाहको टिप्पणी छ – नेपाली नागरिक भएकोले लज्जा बोध भो। समाजवाद उन्मुख भनिएको हाम्रो देशमा सामन्तवाद अझै जीवित रहेछ।
शुशिल कुमार भट्टरार्इ प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ – हुनत पदै ठुलो। तर जनताकी छोरी, कम्युनिष्टकी नेता, महिला सशक्तिकरण आन्दोलनकी अगुवा हुन त राष्ट्रपति भण्डारी। विद्या पनि यिनै, देवी दुर्गा पनि उनै। मेरो सुझाव छ, जनताले रुचाउने गरि भक्ति थापौँ। कता कता ऐश्वर्याभन्दा शौखिन हो कि? बिरालो बानेर श्राद्ध…छोडे पनि हुने।
जुगल भुर्तेल लेख्नुहुन्छ – बिउँझिएर जनताले एकदिन, गाए महान युद्ध गीत। सामन्तहरुको भयो सफाया, दास मात्र रहे जीवित।
जाग्रित रायमाझीको प्रतिक्रिया यस्तो छ – बाँकी जम्मैलार्इ तुच्छ बनाएर उसलार्इ महान बन्नुछ। किनकी ऊ महान हुन अरु तुच्छ बन्नैपर्यो।
प्रकाश भण्डारी ट्वीटरमा प्रश्न गर्नुहुन्छ- घुडै टेक्नुपर्ने? रास्ट्रपति अगाडी कुर्सीमा बसेर टीका लगाउँदा, वा हात मिलाउँदा वा अंकमाल गर्दा रास्ट्रपतिको अपमान हुन्छ र? रैतीबाट जनता कहिले हुने हामी?
अधिवक्ता टिकाराम भट्टरार्इ टिप्पणी गर्नुहुन्छ – गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकले घुँडा टेकेर टीका थाप्नुपर्ने बाध्यता ? आफै घुँडा टेके की टेक्न बाध्य पारियो जे भए नि यो राजतन्त्रको अर्को स्वरुप झैँ देखियो। राष्ट्रपति कार्यालयले यो प्रबन्धमा गरियको गल्ती ठहर गर्दै क्षमा याचना गर्नु पर्छ ।
वास्तवमै जनसमक्ष क्षमायाचना गर्दै यस्ताे नदोहोर्याउने बाचा गर्ने हो भने यसबाट नागरिककाे नजरमा राष्ट्रपति सं‌स्थाकाे गरिमा घट्दैन, बरु बढ्छ ।